ဓာတ်ပုံ (ထက်ခေါင်လင်း/ Myanmar Now)
By ထက်ခေါင်လင်း 15 July 2017
ရန်ကုန် — ပြည်ထောင်စုသစ္စာရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကွက်တချို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ စစ်သည်ကျင့်ဝတ်တွေ၊ နိုင်ငံတကာ စစ်ဥပဒေတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာ ဟုတ်ပါသလားလို့ စစ်တပ်က တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ The Voice သတင်းစာအယ်ဒီ တာချုပ် ကိုကျော်မင်းဆွေရဲ့ ရှေ့နေက ဇူလိုင် ၁၄ ရက် ရုံးချိန်းမှာ တရားလိုစစ်တပ်အရာရှိကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လမှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီရုပ်သံလိုင်းက ပြသခဲ့တဲ့ အဆိုပါရုပ်ရှင်မှာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ စစ်သုံ့ပမ်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခြင်း၊ ထိုပြစ်သတ်သူကို တပ်မတော်ဘက်က အရာရှိဗိုလ်ကြီးဖြစ်သူက “အပြစ်လို့ ပြောလို့မရဘူး၊ မုန်းတီးစိတ်နဲ့ လူသားပဲ” လို့ပြောတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုပါရှိပါတယ်။
ထိုုပြောကြားချက်ဟာ စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ်နဲ့ ဆန့်ကျင်နေသလားလို့ ရှေ.နေဦးမျိုးသိန်းက ဗဟန်းမြို.နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်သရဖီအောင်ရှေ.မှောက်မှာ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတပ်မတော်ရဲ. စစ်သည်တော်ကျင့်ဝတ်များတွင် ရန်သူပင်ဖြစ်စေကာမူ စစ်ပွဲအတွင်း ဖမ်းမိတဲ့သုံ့ပမ်း၊ လက်နက်ချတဲ့ သုံ့ပမ်းတွေကို ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်၊ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခြင်းမပြုရလို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူက မူရင်းဖြစ်ရပ်ပေါ်အခြေခံပြီး ဖော်ကျူးရေးသားပြသခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော်သားများ၏ ကျင့်ဝတ်တွင် ရန်သူကို ရန်သူလို သဘောထားရမှာဟု ပါရှိကြောင်း တရားလိုဖြစ်သူ ဒုတိ ယဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“တပ်မတော်ဆိုတာ မတထောင်သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း လူကိုသေစေနိုင်တဲ့ လက်နက် တွေ ပေးထားရတယ်။ တချို့ကိစ္စများတွင် ကိုယ်တိုင်စစ်ဆင်ရေးထွက်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်တပ်စုမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးလုပ်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့အတူ ပေါင်းဖူးမှသိပါမည်” လို့ သူက ပြန်လည်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်များမှာလည်း ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိသည်ကို သာဓကများစွာ ရှိပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကတင်ပြတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေအား မဖြစ်မနေ ဆွဲထည့်ပြီး တပ်မတော်ပုံရိပ်ကျဆင်းသည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ” ဟု သူကဆက်၍ဆိုုသည်။
၁၉၄၉ တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော စစ်သုံ့ပန်းဆိုင်ရာ ဂျနီဗာသဘောတူညီချက်တွင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ မိမိက လက်ရဖမ်းဆီးမိတဲ့သူ ဖြစ်စေ၊ လက်နက်ချ အညံ့ခံတဲ့သူဖြစ်စေ မညှဉ်းပမ်းရ၊ မနှိပ်စက်ရ၊ မသတ်ဖြတ်ရ၊ မိမိသတင်းရရှိဖို့ အလို့ငှာ နှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခြင်းမပြုရဆိုတာကို ထည့်သွင်းပြဌာန်းထားပါတယ်။
Voice နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနှင့် ဖေ့စ်ဘွခ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော “ကျည်ထောင်စုု သစ္စာ” ခေါင်းစဉ်နှင့် သရော်စာဆောင်းပါးမှာ အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်တို့ကို မဖော်ပြထားသော်လည်း တပ်မတော်က ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ပြီးနောက် စာရေးသားသူ ဗြိတိသျှ ကိုကိုမောင်နဲ့ ကိုကျော်မင်းဆွေကို ရဲများက ဖမ်းဆီးကာ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေရဲ. အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နဲ့ တရားစွဲ ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကျော်မင်းဆွေက ဒီဆောင်းပါးဖော်ပြခဲ့မှုဟာ သူ့မှာသာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထွက်ဆိုတာမို့ တရားရုံးရဲ့ ဥပဒေအရာရှိတွေက ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူကို ဒီအမှုကနေ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသစ္စာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မုန်းကိုးဒေသမှာ တပ်မတော်တပ်စုတစုနဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့(MNDAA) တို့နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်မြေပြင်မှာ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါ တပ်ရင်းမှူးအဆင့်မှ လက်အောက် အရာရှိစစ်သည်တွေ အများစုသာ ကျဆုံးဒဏ်ရာရကြတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားလို့လည်းပဲ ရှေ.နေဦးမျိုးသိန်းက တရားလိုစစ်တပ်အရာရှိကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချက်ဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း တရားလိုက ငြင်းခဲ့ပါတယ်။
“ရှေ့တန်းမှာပါဝင်ဆင်နွှဲမှုတွေ ရှိတဲ့အတွက် အောက်ခြေငယ်သားများသာမက ရှေ့တန်းထွက်တဲ့အရာရှိ ကြီးငယ်အားလုံး၊ လက်အောက်ငယ်သားအားလုံးသည် သဘာဝဘေးကြောင့် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်လို့ ထိခိုက်ကျဆုံးခြင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ တပ်မတော်မှတ်တမ်းတွေ မှာ အများကြီးရှိပါတယ်” လို့ တရားခွင်မှာ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းက ထွက်ဆိုပါတယ်။
မကြာမီက နိုင် ငံတော်သမ္မတကနေ လွှတ်တော်ကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းမှာ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ဟာ အာမခံပေးရမယ်လို့ ဖော်ပြထားတာကို ထောက်ပြပြီး ရှေ့နေဦးမျိုးသိန်းက ကိုကျော်မင်းဆွေအတွက် အာမခံတောင်းခဲ့ပေမယ့် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက် အတည်မပြုရသေးတာကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အာမခံတောင်းတာကို တရားသူကြီးက ထပ်မံပယ်ချခဲ့တယ်။
လာမယ့်ရုံးချိန်းကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုလိုက်ပြီး အဆိုပါရုံးချိန်းမှာ တရားလိုဘက်က တင်ပြထားတဲ့ သက်သေထဲက ဗိုလ်ကြီးသန်းထူးကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကိုကျော်မင်းဆွေကို အင်းစိန်ထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ထားပါတယ်။